Ije Chọọchị Katọlik na Trujillo | Akwụkwọ Mgbaafọ nke 2015
TRUJILLO na Chọọchị Katọlik dị n’ezigbo mma. Ọ bụ ya mere otu onye na-ede gbasara ndọrọ ndọrọ ọchịchị ji kwuo, sị: “N’oge Trujillo na-achị, ya bụ, malite n’afọ 1930 ruo n’afọ 1961, Chọọchị Katọlik na gọọmenti Dọminikan Ripọblik na-enyerịtara ibe ha aka. Trujillo na-emelara Chọọchị Katọlik ihe, hanwa kwa ana-akwado ọchịchị ya.”
Trujillo gara Rom n’afọ 1954, ya na poopu abịanye aka n’akwụkwọ ha ji kwekọrịta ịna-emekọrịta ihe. Germán Ornes, onye bụbu onye ndụmọdụ Trujillo, sịrị: ‘Ebe ọ bụ na ndị Katọlik nọ na Dọminikan Ripọblik kwụ Trujillo n’azụ, akwụkwọ ahụ Trujillo na poopu bịanyere aka na ya meziri ka ha niile na-akwadosi Trujillo ike. Ndị ụkọchukwu niile na-akwadokwa ọchịchị ya. Achịbishọp Ricardo Pittini na Achịbishọp Octavio Beras so ná ndị kacha akwado ọchịchị ya.’
Ornes kwukwara, sị: ‘Poopu na-ezitere Trujillo ozi ekele n’oge ọ bụla e nwere ihe pụrụ iche a na-eme. N’otu nzukọ ndị Katọlik nwere na Kiudad Trujilo n’afọ 1956, Francis Cardinal Spellman, bụ́ onye na-anọchite anya poopu, gụpụtara ozi ekele poopu ziri. Ọ bụ Trujillo hụrụ maka ihe ndị e mefuru ná nzukọ ahụ. Mgbe Kadinal Spellman si Niu Yọk bịa, ọ bụ Trujillo nabatara ya. Ọ nabatakwara ya ka onye ukwu. Otú ha si makụọ ibe ha nke ọma gbara n’ihu akwụkwọ akụkọ niile na Dọminikan Ripọblik n’echi ya.’
N’afọ 1960, otu magazin a na-akpọ Time kwuru, sị: “Ka ọ dị ugbu a, o nwebeghị ihe seere Trujillo na Chọọchị Katọlik. Achịbishọp Ricardo Pittini, onyeisi ndị ụkọchukwu niile e nwere n’Amerịka na Mba Ndị Gbara Ya Gburugburu, agbaala afọ iri asatọ na atọ. O kpuokwala ìsì. Ma n’afọ anọ gara aga, ọ bịanyere aka n’akwụkwọ ozi e degaara otu akwụkwọ akụkọ a na-akpọ New York Times ma kwuo na ‘ndị obodo “onye ọchịchị aka ike a” hụrụ ya n’anya, na-akwanyekwara ya ùgwù.’”
Ma, mgbe Chọọchị Katọlik kwadochara ọchịchị aka ike Trujillo na-achị ruo afọ iri atọ, ha malitere ịgbanwe obi ha n’ihi otú ndị mmadụ sizi agba ọchịchị ya ụkwụ. Onye ahụ na-akọ banyere ndọrọ ndọrọ ọchịchị kwukwara, sị: “Mgbe ndị mmadụ gbasiwere ọchịchị Trujillo ụkwụ ike, mechaakwa gbawa mbọ ka e nwee ọchịchị onye kwuo uche ya, Chọọchị Katọlik amaghị ihe ọzọ ha ga-eme ma ọ́ bụghị ịkwụsị ịkwado ya n’agbanyeghị na ha na ya dị n’ezigbo mma kemgbe.”
N’afọ 2011, ndị ụkọchukwu Katọlik degaara ndị Dọminikan Ripọblik akwụkwọ ozi ha ji rịọ ha mgbaghara maka ihe ndị ha mejọrọ. Akwụkwọ ozi ahụ gbara n’akwụkwọ akụkọ a na-akpọ Dominican Today. Ọ sịrị: ‘Anyị na-ekwupụta mmehie anyị. Anyị kwetara na anyị mere ihe ọjọọ. E nwere mgbe anyị na-emeghị ihe ndị anyị na-akụzi na mgbe anyị na-arụghị ọrụ ndị anyị kwesịrị ịrụ. N’ihi ya, anyị na-arịọ ndị Dọminikan Ripọblik niile ka ha gbalịa ghọta anyị ma gbaghara anyị.’
mailto:?body=Ije Chọọchị Katọlik na Trujillo%0a%0ahttps%3A%2F%2Fwww.jw.org%2Ffinder%3Fdocid%3D302015029%26wtlocale%3DIB%26srcid=share⊂ject=Ije Chọọchị Katọlik na Trujillo